क्रिसमसका लागि उत्तम डिजिटल पोस्टकार्डहरू पत्ता लगाउनुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | पुनरावृत्त, टेम्प्लेट
एक सीमा शुल्क सब भन्दा क्रिसमस को सुन्दर, र यो कि हामी समयको साथ साथ हराइरहेका छौं अभिवादन कार्ड क्रिसमस को।
को नयाँ प्रविधिहरू हामीलाई बनाउनुहोस् हामी बाँचिरहेको समयलाई अनुकूल बनाऔं। हामी विश्वास गर्छौं कि तपाईले खुला दिमाग राख्नु पर्छ र सबै विकल्पहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। इन्टरनेटमा हामी हाम्रा प्रियजनहरूलाई चकित गर्न असीम संभावनाहरू भेट्टाउनेछौं। यद्यपि हामीले इन्कार गर्नु हुँदैन पोस्ट हातले, जुन पनि राम्रो विकल्प हुन सक्छ यद्यपि तिनीहरूले अनुमान गर्दछ लगानी भन्दा ठुलो समय। जे भए पनि यस पोष्टमा हामी विकल्पहरूको एक विस्तृत श्रृंखला देख्नेछौं सबै स्वाद को लागी।
1 डिजिटल पोष्टकार्ड
4 मोबाइल मार्फत क्रिसमसलाई बधाई दिन अनुप्रयोगहरू
6 रेड स्ट्याम्प कार्ड
7 क्रिसमस वाक्यांश अनुप्रयोगहरू
8 एनिमेटेड पोस्टकार्डहरू
11 निको कार्डहरू
El डिजिटल ढाँचा यो हालका वर्षहरूमा सबै भन्दा धेरै प्रयोग हुने विकल्पहरू मध्ये एक हो। ठेठ परिवार चित्र अब यो द्वारा पठाईएको छ WhatsApp क्रिसमसको बिदा बधाई दिन छोटो पाठको साथ। हामीसँग क्रिसमसको बधाईहरू बनाउन हाम्रा अन्य डिजिटल विकल्पहरू छन् हाम्रा बाँकी सम्पर्कहरू भन्दा रचनात्मक।
हामी तपाईंलाई देखाउन जाँदैछौं केहि अनुप्रयोगहरू र वेबसाइटहरू तपाइँको सिर्जना गर्न क्रिसमस अभिवादन सजिलै र पूर्ण रूपमा free.
यदि हामी डिजाइन गर्न समर्पित छौं भने, सबैभन्दा स्पष्ट विकल्प प्रयोग गर्नु हो सम्पादन कार्यक्रम फोटोशप वा इलस्ट्रेटर जस्ता पेशेवर। यद्यपि हामीलाई निश्चित चाहिन्छ ज्ञान y क्षमताहरू त्यो हामी सबैमा छैन। चिन्ता नलिनुहोस्, किनकि तिनीहरू अवस्थित छन् अनलाइन फोटो सम्पादकहरू त्यो हुनुको अलावा सित्तैमा तिनीहरू धेरै छन् सजिलो प्रयोग गरेर। उनीहरूसँग पहिले नै सबै क्रिसमस आपूर्तिहरू छन ता कि हामी हाम्रो रूचिमा क्रिसमस कार्ड सिर्जना गर्न सकौं।
पहिलो उदाहरण जुन हामी तपाईलाई ल्याउँछौं फटर, एक छवि सम्पादक जसले हामीलाई अनुमति दिन्छ:
सम्पादन गर्नुहोस् तस्बिरहरू।
बनाउनुहोस् महाविद्यालय, कि छ, विभिन्न फोटोग्राफर को एक रचना बनाउनुहोस्।
डिजाईन विभिन्न स्रोतहरूको साथ।
जब हामी वेबमा हुन्छौं, हामीले जानुपर्नेछ र विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ "एउटा डिजाइन सिर्जना गर्नुहोस्"र देखा पर्ने विकल्पहरू मध्ये हामी छनौट गर्नेछौं"कार्ड"हाम्रो क्रिसमस कार्ड सिर्जना गर्न।
हामीले यो याद राख्नुपर्दछ कि यो एक वेबसाइट हो अंग्रेजीयसैले, सबै हामीले अंग्रेजीमा खोजी गर्नुपर्नेछ परिणामहरू प्राप्त गर्न। छेउमा हामी स्टिकरहरू थप्न सक्छौं जुन "स्टिकर"। यस अवस्थामा हामीले टाइप गर्यौं “स्नोमैन”, स्पेनीमा स्नोमेन, र धेरै विकल्प देखा पर्‍यो। हामी कार्य को तालिका मा अब मनपर्ने डिजाइन कि तान्छौं। हामी सक्छौं राख्नुहोस् हाम्रो रुचि र उसलाई दिनुहोस् आकार उपयुक्त।
जब हामीसँग समाप्त डिजाइन छ, वेबको शीर्षमा हामीसँग विकल्प हुन्छ तपाईंको कम्प्युटरमा फाईल बचत गर्नुहोस् वा हामी गर्न सक्छौं सेयर सीधा वेब मार्फत बाट सामाजिक सञ्जालहरू.
Pickmonkey es एक कार्ड कार्ड सिर्जना मा विशेषज्ञता सबै प्रकारका उत्सवहरू, घटनाहरू वा क्षेत्रहरूको लागि। थुप्रे छ टेम्प्लेट पहिल्यै सिर्जना गरिएको छ प्रयोगकर्तालाई तिनीहरूको आफ्नै डिजाइन सिर्जना गर्न सजिलो बनाउन।
जब हामी सेक्सन चयन गर्छौं जहाँ हामी काम गर्न चाहन्छौं, हामी छेउमा अवस्थित बार मार्फत सम्पादन गर्नका लागि तयार टेम्पलेटहरू देखाइनेछौं। हामी सक्छौ हाम्रो फोटो र पाठहरू थपेर अनुकूलित गर्नुहोस्.
मोबाइल मार्फत क्रिसमसलाई बधाई दिन अनुप्रयोगहरू
सबैभन्दा सम्भाव्य विकल्प यदि हामीसँग धेरै समय छैन भने तपाईंको मोबाइलको साथ एउटा क्रिसमस पोस्टकार्ड सिर्जना गर्नुहोस्। हामी यो गर्न सक्दछौं जब हामी बसको लागि पर्खिरहेका छौं, हामी प्रतीक्षालयमा छौं वा हामीसँग खाली समय छ। थप रूपमा, हामी गर्न सक्दछौं हाम्रो सबै व्हाट्सएप समूहहरू पठाउनुहोस्.
अनुप्रयोग Justwink हामी यसलाई सबै प्रकारको बधाई सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं। तिनीहरूको टेम्प्लेट मूल हो, र हामीलाई अवसर दिन्छ अडियो थप्नुहोस्, जसले हामीलाई एक प्लस प्रदान गर्दछ जुन सबै अनुप्रयोगले प्रस्ताव गर्दैन। को लागी उपलब्ध छ आईओएस y एन्ड्रोइड.
रेड स्ट्याम्प कार्ड
यो अर्को अनुप्रयोग हो जुन साधारण भन्दा बाहिर छ। यो छ टेम्पलेट को विस्तृत विविधता जुन हामी हाम्रो रुचि अनुकूलित गर्न सक्छौं। थप रूपमा, यसले हामीलाई सामाजिक नेटवर्कहरू वा विकल्पको माध्यमबाट तिनीहरूलाई डिजिटल रूपमा पठाउन अनुमति दिन्छ तिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्। डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस् आईओएस o Android.
क्रिसमस वाक्यांश अनुप्रयोगहरू
यो अनुप्रयोग केहि फरक छ, तर हामी यसलाई जोड्न चाहान्छौं किनकि यो वास्तवमै चाखलाग्दो हुन सक्छ। यो एक अनुप्रयोग हो अधिक उत्तम क्रिसमस वाक्यांशहरू स collect्कलन गर्नुहोस्। तिनीहरू मूल पाठहरू पाउन सक्दछन् तपाईंको व्हाट्सएप मित्रहरूको समूहमा पठाउन।
यो उपयोगी हुन सक्छ यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जो के तपाईंलाई लेख्न थाहा छ?। हामी यस साइटबाट प्रेरित हुन निश्चित छौं। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ.
अर्को विकल्प जुन मलाई वास्तवमै मनपर्दछ त्यो हो एनिमेटेड पोस्टकार्ड, सबै प्रकारका भिडियोहरू अधिक रमाईलो तरिकामा क्रिसमस बधाई दिन। केहि हाइलाइट गरौं जालो जसले हामीलाई यी सुविधाहरूको पोस्टकार्ड साझा गर्न अनुमति दिन्छ।
यस वेबसाइटले हामीलाई अत्यधिक रंगीन क्रिसमस कार्डहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौं सार्नुहोस् र पनि तिनीहरूलाई संगीत थप्नुहोस्। यसले तिनीहरूलाई मूल र रचनात्मक पोस्टकार्ड बनाउँदछ। जे होस् यदि हामी बढि रूढिवादी छौं भने हामी एउटा बनाउन सक्छौं क्लासिक पोस्टकार्ड। सत्य यो छ कि त्यहाँ छ सबै स्वाद को लागी.
योसँग एनिमेटेड पोष्टकार्डको धेरै विस्तृत श्रृंखला छ। हामीले यस साइटमा राखेका एकमात्र नकारात्मक पक्ष भनेको त्यो हो तपाइँलाई तिनीहरूलाई अनुकूलित गर्न अनुमति दिदैन, किनकि एनिमेसन पहिले नै सिर्जना गरिएको छ। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ र तपाइँका सबै विकल्पहरूमा एक नजर लिनुहोस्।
यो पृष्ठ तपाइँलाई सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ एक साँच्चै हास्यास्पद पोस्टकार्ड जसमा मुख्य पात्र तपाईं हुनेछन्। पर्छ तिम्रो अनुहार राख र जो कोही पनी शरीरको मा तपाईं चाहानुहुन्छ को। भिडियोको समयमा एल्भ्स नाच, यस तरीकाले, तपाइँ छुट्टिको बधाई दिन नाचिरहेको देखिन्छ। एक छ हास्य को स्पर्श जो तपाईंले यसलाई पठाउनुभयो मुस्कान पाउन उत्तम। धेरै छ प्रयोग गर्न सजिलो। तपाईं यस समयमा कम्प्युटर क्यामेराको साथ छवि लिन सक्नुहुनेछ, वा तपाईंको ग्यालरीमा रहेको एउटा ह्या hang्ग गर्न सक्नुहुन्छ।
En यो वेब, सक्छ क्रिसमस पोस्टकार्डहरू अनुकूलित गर्नुहोस् तिनीहरूलाई प्रत्येक सम्पर्कमा पठाउन। तपाईंले गर्नु पर्छ तपाईको डेटाबेसमा रेजिष्टर गर्नुहोस् एनिमेटेड पोष्टकार्डहरूमा पहुँच गर्न सक्षम हुन र तपाईं तिनीहरूलाई पछि पठाउन बचत गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। व्यक्तिगत रूपमा, यो त्यहाँ बाहिर एक उत्तम वेबसाइट होईन। उनीहरूसँग अफर पनि छैन जुन धेरै ध्यान आकर्षित गर्दछ।
तपाईंले देख्नु भएको छ, विकल्पको दायरा ठूलो छ र हामी ती मध्ये कुनै पनि छनौट गर्न सक्दछौं। को परिणाम यो राम्रो हुनेछ र हाम्रा साथीहरू र परिवारले क्रिसमसको अभिवादन प्राप्त गर्न मन पराउँछन्। परम्परा गुमाउनु हुँदैन!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » यस क्रिसमसको लागि डिजिटल पोस्टकार्डहरू